अब नेपालमै पल्सर मोटरसाइकल उत्पादन हुने, के मोटरसाइकलको मुल्य घट्ला त ? अहिले कुन बाईकलाई कति मूल्य पर्छ पुरा विवरण हेर्नुहोस् - Movies Trends
अब नेपालमै पल्सर मोटरसाइकल उत्पादन हुने, के मोटरसाइकलको मुल्य घट्ला त ? अहिले कुन बाईकलाई कति मूल्य पर्छ पुरा विवरण हेर्नुहोस्
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा युवा माझ सबैभन्दा लोकप्रिय मोटरसाइकल पल्सर नेपालमै उत्पादन गर्ने तयारी थालिएको छ ।
बजाज अटो क्राफ्टले नेपालमा बजाजका मोटरसाइकल उत्पादन सुरु पनि गरिसकेको छ । निकै लामो समयदेखि उत्पादन सुरु हुने कुरा आएपनि उत्पादन सुरु हुन सकेको थिएन । अब भने बजाजको डिस्कभर उत्पादन सुरु भएको छ ।
अब छिट्टै बजाज १५० सिसिको उत्पादन सुरु गर्छौ बजाज अटो क्राफ्टका प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले भने । उत्पादन सुरु भएको १७ बर्षपछि पहिलोपटक नेपालमा नै बन्न सुरु
भएको हो । यसले मोटरसाइलका पारखिलाई नयाँ स्वाद दिन सक्ने छ ।
बजाज इन्डियाको उत्पादन पल्सर नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियाली बजारमा समेत निकै चर्चित रहेको छ ।
बजाज अटोले सन् २००१ बाट पल्सरको उत्पादन सुरु गरेको हो । कम्पनीले अहिलेसम्म १ करोड युनिट पल्सर बिक्री भएको जनाएको छ ।
१ करोड युनिट बिक्रीपछि कम्पनीले एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै पल्सरको नयाँ सिरिज ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
मोटरसाइकल अर्थात बाईक अहिले सर्वसाधारणका लागि अति आवश्यक बस्तु भैसकेको छ । कुनै समय विलासिताको साधनको रुपमा गनिने बाइक अहिले दैनिक जीवनलाई तान्ने रथ बनेको छ ।
नेपाली बजारमा विभिन्न कम्पनीका विभिन्न मोटरसाइकलहरु उपलब्ध छन् र तिनीहरुको मूल्य पनि बाइक र कम्पनी पिच्छे फरक छन् । आज हामीले तपाईहरुको लागी हरेक बाइकको मूल्यहरू प्रस्तुत गर्दै छौं । यी मूल्यहरू आधिकारीक नभई बजारमा चलिरहेको रेटलाई आधार मानेर तयार पारेका हौँ ।
Bajaj Bike Models Price:
Rieju Bike Models
Scomadi Bike Models
Runner Bike Models
CFMOTO Bike Models
कन्डम नलगाई यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ नबस्ने सजिलो तरिका …